Archive du 20190508
Mpiara-miasa amin-dRajoelina Manomboka mivoaka ny dosie maloto…
Mpisoloky i Holijaona Rabaonarijaona izay nivarotra ny tetikasa IEM tamin-dRajoelina, hoy ny lahatsoratra navoakan’i Mahery Lanto Manandafy tamin’ny tambajotra ara-tsosialy facebook.
Varin’ny BNGRC tao Toamasina Nalaina kandida depiote amboletra ?
Nisy ny fampitam-baovao vonjimaika voaray, fa noraofina kandida depiote iray ny varin’ny sampan-draharaha misahana ny fitantanana ny loza voajanahary na ny BNGRC any Toamasina.
AREMA Fanohizana ny asa nataony no misy eto amin`ny firenena
“Manana ny foto-kevitra hijoroany ny antoko Arema ary tsy mahamaika ny hanohitra na hanohana be fahatany ny fitondrana”, hoy Atoa Simon Pierre, sekretera jeneralin`ny antoko AREMA.
Fifidianana solombavambahoaka Inona marina ireo hevitra fonosiny ?
Hahazo ny maro an`isa ve i Andry Rajoelina ? Hitazona ny toerany ve ireo ministra ?
Fanolanana ankizivavy 14 sy 12 taona Nadoboka am-ponja ao Fianarantsoa ilay polisy
Polisy mpiandry raharaha amin’ny alina sady vao mpiana-draharaha ity mpitandro filaminana voarohirohy nanolana ankizy vavy roa tsy ampy taona ity.
Beryl Razafindrainony voasazy mandra-pahafaty Tsy mbola naharay taratasy manameloka azy izany
Tsy menatra sady tsy malahelo amin’ny fanamelohana tsy mitombina atao amiko aho dia ny hoe voasazy mandra-pahafaty tsy hikitikitika lalao tsipy kanetibe intsony,
Moto Scooter Red Dog Fantatra ireo tompondakan’i Madagasikara dingana faharoa
Tontosa teny amin’ny “Circuits Srk Imerintsiatosika” tamin’ny alahady 05 mey lasa teo ny fifaninanana “Moto Scooter”
Ligue des Champions Nofaizin’i Liverpool 4 – 0 ny FC Barcelone
Boribory marina ny baolina ary tena avo lenta ny endri-dalaon’ny ligue des champions. Samy nahafaty baolina roa be izao i Divock Origi (7’sy 79’’) sy Georginio Wijnaldum(54’ sy 56’)
Lasa anjely latsaka an-tany !
Mandeha ny fampielezan-kevitry ny fifidianana solombambavambahoaka, ary maro ny zavatra hita taratra eny.
Taksibe Ivato-Vassacos Hatao filamatra, hasiana “GPS”
Betsaka ny fitarainana nataon'ny mponina sy ny mpandeha amin'ny zotra Ivato - Vassacos noho ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny koperativa mpitatitra.
Famatsiam-bolan’ny Vondrona Eoropeanina Laharam-pahamehana ny ady amin’ny fahantrana
Nanomboka omaly talata 07 mey tetsy amin’ny Parvis Analakely ny fankalazana ny herinandron’i Eoropa izay nampirantiana tranoheva maro nampahafantarana ireo tetikasa vatsian’ny Vondrona Eoropeanina vola.
Tale jeneralin’ny ofisin’ny sinema Noterena hametra-pialana
Nafampana tetsy amin’ny ofisim-pirenena misahana ny sarimihetsika na OMACI tetsy Ambodifilao omaly maraina.
Basy tsy ara-dalàna Amin’ny 20 jona no fe-potoana hanaterana azy
Nanamafy omaly talata 7 mey ny minisitry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Leon Rakotonirina fa manana hatramin’ny 20 jona 2019 ho avy izao ireo olona manana fitaovam-piadiana tsy misy taratasy ara-dalàna mba hanatitra ny azy eny amin’ny mpitandro ny filaminana.
“La Haute Ville” Tra-tehaky ny polisy ireo mpanendaka mpizahatany
Mpanendaka sy mpanao herisetra enin-dahy sy vehivavy iray mpivarotra halatra no voasambotry ny polisy avy ao amin'ny kaomisaria etsy Ambohijatovo, nanomboka ny sabotsy 4 mey teo.
Ny volana oktobra amin’ity taona ity no hanatanterahana ny fifidianana ben’ny tanàna eto Madagasikara, izany hoe enim-bola aorian’ny fifidianana solombavambahoka.
Tendrombohitra Miadamanjaka Ampitatafika Nahitana tapaka filahiana nihoson-dra…
Tsy mandry fahalemana ny kaominina Ampitatafika, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
Fampiasana ny fandrindram-piterahana 12 taona dia efa manao izany ny ankizivavy
12 taona efa mampiasa fomba fandrindram-piterahana na FISA ireo tovovavy kely eto amintsika raha sivy taona no zandriny indrindra any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy.
Fokontany Tsiadana Lalan-kely maro nohatsarain’ny CUA
Mitohy hatrany ny fanamboarana ny lalan-kely eny anivon’ny fokontany ao amin’ny boriboritany faharoa ao anatin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).
Famatsiam-bola Hanamafy ny fanaraha-maso ny OMS
Tsy manaiky ny fanodinkodinam-bola ho amin`ny vaksiny ny sampandraharahan`ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana (OMS). Hanamafy ny fanaraha-maso an`i Madagasikara izy ireo manomboka izao.